२३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको घटनामा आयो नयाँ मोड, २४ घण्टा नहुँदै मृत्युको कारण खुल्यो ? अब के होला ? - Thulo khabar
२३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको घटनामा आयो नयाँ मोड, २४ घण्टा नहुँदै मृत्युको कारण खुल्यो ? अब के होला ?
मृत भेटिएकी सुजिता भण्डारीका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै स्थानीयवासीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरुले प्रहरीले ल्याउँदै गरेको शव समेत रोकेर राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन् । राप्ती नगरपालिका–३ झुरझुरेमा बिहान १०ः१५ बजेबाट सडक अवरुद्ध गरिएको हो । असार ११ देखि सम्पर्कविहीन भएकी राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको शव आइतबार साँझ घरबाट करीब चार किलोमिटर पर ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको झाडीभित्र मृत अवस्थामा भेटिएको थियो ।
भण्डारीको अ’पह’रण भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । अन्तिम पटक भण्डारीले दिदीलाई फोन गरेर आफूलाई तीन जनाको समूहले अ’पह’रण गरेको बताएकी थिइन् । घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली पनि खटिएको थियो । प्राविधिक विश्लेषणका क्रममा युवतीले भनेभन्दा फरक स्थानमा उनको लोकेशन देखिएपछि प्रहरीले उनी अ’पह’रित नभएको हुनसक्ने आशंका गरेको थियो । उनी बे’पत्ता भएपछि फिराैती वा अन्य कुनै माग राखेर कसैले सम्पर्क पनि गरेको थिएन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा प्रहरी उपरीक्षक ओम अधिकारीले भण्डारीको शव भिरालो जमिनको लहरोमा अ’ड्किएको अवस्थामा फेला परेको बताए। शव भेटिएको स्थान नजिकै स्प्रा’इट’को बोत्तल फेला परेको छ। उक्त बोत्तलमा पतेरालाई मा’ ‘र्न प्रयोग हुने वि’ ‘ष फेला परेको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार झट्ट हेर्दा वि’ ‘ष सेवनका कारण सुजिताको मृत्यु भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । तर यसको निर्क्यौल पोष्टमार्टम रिपोर्टले मात्रै गर्नेछ । पोष्टमार्टम भरतपुर अस्पतालमा गर्ने कि काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन ।
एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार उनले बोक्ने झोलासमेत घटनास्थल छेउमै भेटिएको छ । सुजिताको मोबाइल हालसम्म भेटिएको छैन, तर ब्याट्री चाहिं फेला परेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘मोबाइल खोलामा फालेको हो वा कहाँ गयो भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ स्थानीयका अनुसार जंगलको बीचमा गाडी जाने ठाउँ छैन । प्रहरीका अनुसार कसैलाई त्यहाँसम्म लैजानु परे बोकेर लानुको विकल्प देखिँदैन । त्यसैले सुजिता आफैं घटनास्थलसम्म पुगेको हो कि भन्ने प्रहरी आशंका छ ।